I-Acoustic Foam, Isithiyo Somsindo, i-Acoustic Diffuser - iVinco
I-Shenzhen Vinco Soundproofing materials Co., Ltd igxile ezintweni zokuvimbela umsindo iminyaka eminingi futhi inikezela nge-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa.
Imikhiqizo yeVinc imboza ukwahlukaniswa komsebenzi, ama-sounproofing panels, amagwebu okuvimbela umsindo, ukuvimbela umsindo odongeni, ukuvimbela umsindo phansi, ukuvimbela umsindo ophahleni, ukuvimbela umsindo wepayipi, amaphaneli we-acoustic, ukufakwa kwe-acoustic, amaphaneli wokumunca umsindo, izinto zokwambathisa, amagwebu adonsa umsindo nokunye.
UVinco ugxile emandleni endawo ngenkathi ebuka umhlaba, ama-duo emisha emisha, ikhwalithi ethembekile nokusebenza kwezindleko eziphezulu, imikhiqizo yeVinco havd ithandwa kakhulu ngamakhasimende.
Sineqoqo eliphelele lemishini elawulwa ngokuzenzekelayo ngamakhompiyutha kanye nabasebenzi bezobuchwepheshe abaqeqeshiwe ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu usezingeni eliphakeme. Ukuthengiswa kwethu kwaminyaka yonke kungafinyelela kumamitha-skwele angama-500,000 we-Soundproofing Materials, imikhiqizo ye-Acoustic, ukwahlukanisa okuhambayo, Izinto Ezihlanganisiwe. Uyemukelwa ukuvakashela imboni yethu ukwakha ubuhlobo obude bokusebenzisana kwebhizinisi. Sizokunikeza insizakalo enhle kakhulu, ikhwalithi enhle nentengo yokuncintisana.
• 2015 - Ukunwetshwa kwesikali sokukhiqiza, ukuthengiswa kwanyanga zonke okungaphezu kwamamitha-skwele angama-200,000 wezinto zokwenziwa kwama-acoustic
• 2012 — Inkampani inenqwaba yemibiko yokuhlolwa kwe-acoustic.
• 2011 — Imikhiqizo yeNkampani ithengiswa emhlabeni wonke.
• 2009 - Izitifiketi Ezifeziwe ze-SGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS.
• 2007 — Ukuvulwa kwefektri yeVinco Soundproofing Materials eseShenzhen kwaqala ukukhiqizwa okukhulu.
• 2003 — Isungulwe yinkampani yezinto zokwakha umsindo iShenzhen Vinco.
Vikela ngokuqinile ngokuya ngamazinga wokuqinisekisa izinga elifanele le-100% lekhwalithi yokuthumela.
√ Ama-SGS CE
Umbono:Ukuze ube ngumngane othenjiwe wamakhasimende womhlaba jikelele. Ukuletha inani eliphakeme lamakhasimende, abasebenzi kanye nabaninimasheya.
Injongo: Ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ezifika ngesikhathi nezenelisayo zokukhiqizwa kwephaneli ye-acoustics kanye nomhlangano.
Imikhiqizo yeVinc imboza ukwahlukaniswa komsebenzi, amapaneli wokuvikela amagama, amagwebu wokuvimbela umsindo, ukuvimbela umsindo odongeni, ukuvimbela umsindo phansi, ukuvimbela umsindo ophahleni, ukuvimbela umsindo wepayipi, amaphaneli we-acoustic, ukufakwa kwe-acoustic, amaphaneli wokumunca umsindo, izinto zokwambathisa, amagwebu amunca umsindo njll.
Ukulondolozwa kwamabhodi okuhambisa umsindo, izindlela zokugcina zansuku zonke nezindlela zokuhlanza
Izinzuzo eziyishumi zemikhiqizo yebhodi ethatha umsindo
(1) Ubufakazi obungenamanzi nobumswakama. Inkinga yemikhiqizo yezinkuni bei ...
Buyini ubuchwepheshe bokwakha bebhodi elithatha umsindo?
1. Iyini inqubo yokwakhiwa kwebhodi elimunca umsindo? C ...
Ungahlukanisa kanjani ikhwalithi yamapaneli adonsa umsindo? Bheka nje izici ezi-6
Ikhwalithi yamaphaneli amunca umsindo inquma ukuncibilikisa umsindo ...
Ulwazi Lokuvala Imisindo
Ungazikhetha kanjani izinto ezizwakalayo? Futhi lokho kusetshenziswa okuhlukile
Izinto ezintathu ezivamile ze-acoustic Izinto ze-Acoustic (ikakhulukazi zibhekisa ...
Amalungiselelo okuqala wokufakwa kwamapaneli amunca umsindo okhuni
Okulandelayo kungumsebenzi wokulungiselela ukufakwa kwe-woode ...
Ungayikhetha kanjani impahla yokwambathisa ekhaya?
Izindlela ezinhlanu ezijwayelekile zokuvala umsindo, okudingeka ukuthi zishintshwe ...
Uzenza kanjani izindonga ezingangeni umsindo endlini? Uhlobo luni lwodonga olungenamsindo oluhle?
Uzenza kanjani izindonga ezingangeni umsindo endlini? 1. Ukubekwa kwe-elastic ...
Ukusetshenziswa kwangaphakathi yimuphi umphumela omuhle wokufaka umsindo omuhle?
Kunezinto eziningi zangaphakathi zokufaka umsindo, futhi kukhona ...
Amapaneli adonsa umsindo anezinto ezikhethekile ezahlukahlukene
Uhlobo lokuqala lokumunca umsindo-webhodi le-polyester fibre yomsindo ...